Nhau - Packaging Supermarket Musika Yakagadziriswa NeInovation
bepa repurasitiki bhegi
kapu yekofi kapu
chigadzirwa chinogadzirwa nemafuta
chibage starch chigadzirwa
bepa PLA chigadzirwa
Kavha Supermarket Musika Wakatongwa NeInnovation
Munyika yekupakira zvigadzirwa uye zvigadzirwa, zvisikwa uye kufambira mberi zvinogara zvichitungamira kune nyowani nyowani dzekuvandudza. Mimwe yemaitirwo echazvino akatotora musika nedutu uye ari kuchinja mashandiro anoita makambani zvigadzirwa zvavo zvekupakata uye maitiro ekutakura.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti imwe yematanho makuru asi ichibva nekukurumidza kutendeuka kweanogona maficha anogona kuwedzerwa kune zvigadzirwa. Isu tese tinoziva kuti zvinodiwa nevatengi uye mazano makuru anogona kupinda mumisoro yedu kuita kunge isipo, izvo zvinowanzoreva kuti mabhizinesi anofanirwa kushanda asingamiri kusimudzira kurongedza kwavo uye maficha aanogona kupa. Mumwe wemienzaniso yakadaro unobva kuna Robert Hogan, director webhizimusi repasirese kusimudzira kweZip-Pak. Hogan nguva pfupi yadarika akataura kuti mamwe makambani akashandisa vashanduri vetekinoroji kumachina avo azvino anotendera kuti zvinhu zvitsva zviwedzerwe mukati memavhiki mashoma matanhatu. Izvi zvinoita kuti nzira yekugadzira seyese izive kushomeka uye iyo shoma shoma yekuwedzera mari inodiwa.
Pamusoro peizvi, chimwe chinhu chinonyanya kufarirwa mumusika wekutakura zvinhu zviri nyore. Vatengi vanhasi vanoda kurerukirwa pamatanho ese ekutenga kwavo. Kana makambani akwanisa kupa izvi kune avo vatengi, ivo nekukurumidza uye nyore kugadzirisa kukwidziridzwa kwechiratidzo chavo uye zvigadzirwa zvavo. Mukuita kudaro, izvi zvinoda kuti mabhizimusi nevagadziri vawedzere kudyara muhomwe yavo yekusarudza mapakeji, zvisinei nemutengo. Isu tinoona yakanakisa muenzaniso muiyo Giants Sunflower Mbeu pasuru, uko chikafu chinogara chakachengetedzwa zvakachengeteka mukati mekabhegi rayo nekuda kweiyo zip-yekukiya ficha kumusoro kwepamusoro. Izvi hazvingobatsire chete kuvandudza mashandiro evatengi uye nyore kushandisa, asi zvakare inovandudza hupenyu hwesherufu hwechigadzirwa panguva imwe chete.
A ichangoburwa Yekutsvagisa neMarket mushumo yakawana kuti chimwe chakakurumbira chikamu cheye indasitiri yekurongedza shanduko yazvino ndeyekushongedzerwa kwezvipuka. Rudzi urwu rwekupihwa rwatoona kukura uye rucharamba ruchikwira mukuzivikanwa, pamwe neyakajairika maitiro kune inoenderera uye epamberi mapakeji maitiro. Nekuda kweizvozvo, isu tinogona kungoona biodegradable kurongedza kuva yakakosha uye yakakosha mutambi mune yekupakisheni inopa musika.
Sezvineiwo, vagadziri vazhinji vari kuyedza kuyedza kusiyanisa zvigadzirwa zvavo kubva kune vanokwikwidza nekupa kuvandudza kune yakasimbiswa indasitiri zviyero. Sezvo makambani aya achiramba achishandisa kurongedza senge svikiro kuchengetedza nekusimudzira kuchengetedzeka kwenzvimbo, iko kudiwa uye kugona kwekukura kuchazongomerera mberi. Izvi zvinoreva kuti kana zvasvika pakusangana nevatengi zvishuwo, biodegradable uye eco-hushamwari kurongedza maitiro ndiwo anotevera anokwira maitiro.
Post nguva: Jul-24-2020
Adress: Kwete 5051, Shengli East Str, Kuiwen Dunhu, Weifang Guta, Shandong Pro, China
Kavha Zvekushandisa Musika Yakatungamirwa Na ...
Waste kwete, haidi: Yakawanda sei kurongedza w ...